बेलायतमा एक व्यक्तिले प्रेम प्रस्ताव राख्न शरीरमा आगो लगाए ! « Pariwartan Khabar
बेलायतमा एक व्यक्तिले प्रेम प्रस्ताव राख्न शरीरमा आगो लगाए !
6 September, 2020 11:41 am
प्रेम को सँग र कति बेला भन्ने हुदैंन जो सँग जति बेला नि हुन सक्छ, र जो सँग प्रेम हुन्छ हामी प्राय : प्रेम प्रस्ताव राखेकै हुन्छौं उस्को प्रतिक्रियाको लागि अनि प्रेम प्रस्ताव राखेपछि स्वीकार होला वा नहोला भन्ने पीरले प्रत्येक प्रेमीलाई सताउँछ नै । जसले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गराउनकै लागि नयाँ नयाँ शैली अपनाइन्छ ।
यस्ता शैली रोचकमात्र हुँदैनन् कुनै कुनै बेला बहुत खतारनाक पनि हुन्छन् । यस्तै सबैलाई चकित बनाउने घटना छ बेलायतको । यस्ता शैली रोचकमात्र हुँदैनन् कुनै कुनै बेला बहुत खतरनाक पनि हुन्छन् । यस्तै सबैलाई चकित बनाउने घटना छ बेलायतको ।
बेलायत निवासी रिकी एश नामक एक ब्यक्तिले आफ्नी प्रेमीका कट्रीना डबसनलाई विवाहको प्रस्ताव राख्दा अपनाएको शैली डरलाग्दो मात्र छैन यो खतरनाक पनि छ । पेशाले स्टन्टम्यान रिकी विवाहो प्रस्ताव राख्न प्रेमिकाको अघि शरीरमा आगो लगाएर पुगे । त्यहाँ उनले फिल्मी स्टाइलमा घुडाँ टेकेर विवाहो प्रपोज गरे ।
रिकीकी प्रेमिका पेशामा नर्स हुन् । उनीहरुको भेट अनलाईनमा भएको थियो । तर जब दुबैले भेटे तब उनीहरुको प्रेम टुट्ने अवस्थामा पुग्यो । खासमा कट्रीनाको उचाई ६ फिट ३ इञ्च थियो भने रिकीको उचाई केवल ५ फिट ८ इञ्च थियो । तर रिकीको प्रेम र उनको व्यवहार राम्रो भएको कारणले कट्रीनाले उनलाई नै रोजिन् ।